နိုင်ငံရေး step တခု မြှင့်ကို မြှင့်မှဖြစ်မယ်
ကိုဌေးကြွယ်တို့ အုပ်စုဖြစ်ဖြစ် သံဃာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ပြည်သူ့အစိုးရ မြန်မြန်ဖွဲ့ မြန်မြန်ကြေညာပြီး နအဖကို တိုက်မှဖြစ်မယ်။ ပြီးမှ UN ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ကို ၀င်ဖို့ အကူအညီတောင်းရမယ်။ အန်အယ်လ်ဒီစီအီးစီတွေလည်း ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိ။ လွှတ်တော်အမတ်တွေလည်း ဘယ်ဆီမှာလဲ မသိ။ လုံခြုံတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ ကိုဌေးကြွယ် တို့အုပ်စုသာ အစိုးရအဖွဲ့ကြေညာပြီး နအဖကို မြန်မြန်တိုက်ပါ။ အားလုံးကလည်း နိုင်ငံရေး step တခု မြှင့်တဲ့အနေနဲ့ ထောက်ခံကြပါ။ နိုင်ငံရေး step တခုကို မမြှင့်နိုင်ရင် အကုန်လုံး သေကုန်ပါလိမ့်မယ်။ သံဃာတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အစိုးရမြန်မြန်ဖွဲ့ကြပါ။ အစိုးရဖွဲ့ပြီးတိုက်ခြင်းသာ နအဖအမြန်ပြုတ်မယ့်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၈၈တုန်းက ဦးနုအစိုးရဖွဲ့တာကိုလည်း မထောက်ခံ၊ ကျန်တဲ့လူတွေကလည်း အချိန်မီ ကြားဖြတ်အစိုးရ (သို့) စင်ပြိုင်အစိုးရမဖွဲ့ခဲ့လို့ ခံခဲ့ရတာပါ။ ဆရာဝင်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သံဃာနဲ့ ပြည်သူတွေ များများမသေအောင် စေတနာနဲ့ အကြံပြုတာပါ။ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ
Posted byဒေါက်တာလွဏ်းဆွေat6:41 PM
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေရဲ့အကြံကို ၁၀၀%ထောက်ခံပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကို UN ကနေမကူညီရင် အပြစ်မဲ့နိုင်ငံသားတွေပဲ ဒဏ်ရာရ အလဟသ အသက်ပြောက်ကျဆုံး ရပါလိမ့်မယ်။
Yes, it isagood idea. We all need to be wiser and cleverer. If we still continue like right now (walking and praying), they will shoot again for sure because they are like cold-blooded killers. I am worry for our Buddhist monks, Students and people of Burma. So anyone who hasagood idea like Dr. Loon Swe, pleased help our Burmese people by writing your suggestion on this page.
September 28, 2007 7:20 AM
I also agree these words of Dr. Lwan Swe. We must do in secrect. We must beat these fools, Than Shwe and his followers.
Itsavery MUST idea for our people.We all should spread abt it to all!!!! Our furture is in our hands!!!
Now, people all over the place are interested in Burma revolution. Burmese people from around the world should organize massive demonstration with the country's citizens and residents, who believes freedom, in their own location.
Thiha Kyaw Zawsaid...
I really don't think that UN and international communities will recognize that gov if 88 students formedagov because they are not legally elected. Probably, CRPP can do it but they are under arrested now as far as I know. Military isastep over ahead now.
U Nu could do it and International could recognize him immediately because he was the legally elected last MP and Ne Win took the power from him. The situation is different now.
That's why the role of NLD and CRPP is extremely important now. They only can call parliament or formedagov as far as I know. NLD and CRPP have to be survived, otherwise, we won't have any hope.
ထောက်ခံပါထယ် ခင်ဗျာ။ ခုချိန်မှ လူထုကို ထိရောက် တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပေး ဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။ ဒီတိုင်း ဆက်သွား ရင်တော့ အားလုံးသေကုန်မှာ သေချာပါတယ်။ ကိုလွဏ်းဆွေ အနေနဲ့ အကြံပြုတယ် ဆိုတာ ထက် ထိထိရောက်ရောက် တိုက်တွန်းပေးနိုင် ဖို့ ကြိုးစားစေ့ ချင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ကျနော်လဲ ပူးပေါင်း ပါဝင်ပါမယ်ခင်ဗျာ။
I agree with Dr.Lun Swe. But What if this killer regime doesn't recognizeanew interim government formed by 88 students groups and interested political parties.
Great idea...hurry up........!!!!!
It was very good plan though. But is there any other way that we can beat the goverment? To my opinion, there is another way we can demonstrate to goverment in non-violation that we stop working and travelling for days/months both general worker and goverment's servantif is it possible. I think it gradually affect them in some how. Please give us advice and suggestion. All welcome. ngemin@adpost.com
အ န္တရယ် အရှိဆုံးနဲ့ ဆင်ခြင် ဥာဏ်ခေါင်း ပါးမှု၊ မိုက် မဲမှုအပြင် ဘာချီးကြူးစရာမှ မ တွေ့ရတဲ့ အကြံပေးချက် သာဖြစ် ကြောင်း ထောပနာလိုက် ပါတယ်။ ဒါ ကျုပ် ရဲ့ ဒီမိုက ရေစီ အခွင့် အ ရေးဗျ၊ ဆိုရင် လဲ သ ဘောပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သည် လို လူမျိုးတွေ မြန် မာ့နိုင် ငံရေးထဲမှာ ရှိနေတာကိုက တိုင်းပြည် ကံဆိုးတယ် လို့ မှတ် ချက်ပြုလိုက် ပါတယ်။
DO BAMA TWE NYI NYUT THIN PAR P TA YORK PYAW TARKO TA YORK WAYPHAN NAY BOE HTAT TA KHU KHU KO AKAUNGSONE LOK NAI BOE KA NYINOUT MU SHI BOE AYAY KYI PAR TAE.
LU3YORK SHI YIN2PARTI KWEL TAK TAE BAMA AKYINT SOE TWE PHOUT P TAYORK AKYAN PAY TAR KO MA PHIT PHIT AG LOKE THIN PAR TAE
DR LWAN SWE PYAW TAR NEE LAN KYA PAR TAE DAR PAY MAE LU MYO SONE AYOU ASA MYO SONE ZA YITE SONE NAY TAR KYAUNT ASOE YA PWEL BOE KA KHAT KHEL NAI PAR TAE
DAR PAY MAE YA NAI PAR TAE NYEE LOE MA YA NAI PHIT NAY TAMYA BAMAR PYI KO D SIT ARR NAR SHIN TWE A KWIN KAUNG YA NAY OHN MAR PAR
GAUNG SAUNG KAUNG TA YORK YA BOE ARR NAR SHIN MA HOTE TAE GAUNG SAUNG TA YORK YAE U SAUNG MHU NAUT KO NAUT LIKE KG TA YORK PHIT AUNG AYIN KYO SAR KYA YA MAR PHIT PAR TAE
LAT SHI SIT ARR NAR SHIN LAT HTEL KA NAI NGAN TAWW ARR NAR KO PYI TU ASOE YA KA AYIN SONE LWEL PYAUNG YOU KYA YAMAR PHIT PAR TAE
PEE MA SIT MAHN PEE QUALITY PYIE TAE DEMOCRACY PAN TAI KO YORK LAR MAR PHITLAR BOE4NIT TA KHAR YWAY KAUT PWEL LOTE P
PYI TU KA YWAY KAUT TAE LU DHU KA LO LAR TAE TU KA U SAUNG TWAR YA MAR PARKHU LO ARR LONE KA DEMOCRACY SO P LWEL NAY KYA TA MYA ARR NAR SHIN TWE ATAR SEE YA NAY OHN MAR PAR
KHU LO NHIT PAUNG 22 NEE PAR KO LWAN SWE LO TI KYA TAE MU NAE SWAY NWAY TAR LOK KYA TAR MA TWE YA PAR BU DAR KYAUNT KO NYUNT SHWE LO BAR MA AKYAN MA PAY BAE TU MAYAR PYAW TAR APYIT TIN WAY BAN TAR KO PYIN TINT PAR TAE
DAR PAY MAE PYI TU TWE NAR LAE MHU SHI LAR BOE KA TOK NAY PYI TAWW MYOR LAY TAI WAY NAY OHN MA LAR SOE YIAN MI PAR TAE
WIN HTUN WIN (U.S.A)
suddenly there are people who want to take its place? isn't it so soon? isn't it too obvious? outstanding!!!
that is notapolitical step uncle! another political stunt to sacrifice more people including San-ga
လူငယ် အများစုက ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တာ အကြံပြု ထောက်ခံနေတာ ကို..သေခါနည်း..ဦးညွန့် ရွှေတစ်ယောက်သာ..အပြင်းအထန် ကန့် ကွက်နေပုံထောက် ရင်တော့ .."ဆေ"ွ နဲ့"ရွှေ."..အမျိုးတော်ကြတယ် ထင်တယ်...
အခု နည်းလမ်းကို မကြိုက်လို့ထောက်မခံရင်..ဘယ်လိုများ အကြံ ရှိနေလည်းပြောပေါ့..အွန်လိုင်းမှာ ရေးသမျှစာတွေ သတိထားမိသလောက်က တော့ကောင်းတာသိပ်မတွေ့ ရဘူး...ဖက်ဆုတ် မဲ့ စာမျိုးဘဲ တွေ့ရတာများတယ်...။
U Nyunt Shwe,
If you don'tagreet with this idea, please come up with better idea.Or even if you cannot come up with any idea, you should have argued in any other better ways.
" Ah thet kyi pi, ah chain si par byar"
louse idea, not practical.
It isagood idea butalittle late information. We have no good internet access.
Radio Free Universe :said...
ပြည်သူ့ အစိုးရဖွဲ့ စည်းခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ( သမ္မတ )
ဦးတင်ဦး (ဒု သမ္မတ ) - ၁
ဦးဝ ( ဒု သမ္မတ ) - ၂
ဦးဥာဏ်ဝင်း ( ၀န်ကြီးချုပ်)
ဦးမင်းကိုနိုင် (ဒု-၀န်ကြီးချုပ်) -၂
ဦးဝင်းထိန် (ကာကွယ်ရေး )
ဦးထွန်းအောင်ကျော် ( ပြည်ထဲရေး )
ဦးအုံးကြိုင် (ဘဏ္ဍာရေး နှင့် အခွန် )
ဦးမင်းဇေယျ (လယ်ယာ နှင့် သစိတောရေးရာ )
ဦးကိုကိုကြီး ( ပို့ ဆောင် ရေး )
ဦးဌေးကြွယ် ( သာသနာရေး )
ဦးစိုင်းသိန်းဝင်း ( နည်းပညာ နှင့် လျှပ်စစ် )
ဦးပြုံးချို ( စက်မှု နှင့် လက် မှု )
ဦးဂျင်မီ ( မွေးမြူရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်း )
ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး (နယ်စပ် ရေးရာ )
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် (ကျန်းမာရေး )
ဦးဖေအောင် (ပညာရေး )
ဒေါ်ဇိုရာဖန်း (လူမှုဖူလုံရေး )
ဒေါ်နော်အုံးလှ ( ယဥိကျေးမှု )
ဦးအောင်လင်းထွဋ် ( အမျိုးသားလုံခြုံရေး)
ဦးဟန်သာမြင့် ( ကုလသမဂ္ဂ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်)
၀န်ကြီးချုပ်ရုံး ၊ပြည်သူ့ အစိုးရအဖွဲ့ 
October 25, 2010 12:19 AM
အစိုးရ တစ်ရပ်ဖွဲ့ ဖို့က အတော်လေးနောက်ကျသွားပြီထင်တယ် ၊ နောက်ကြောင်းပြန်ရရင်တော့ ၈၈ အရေးတော်ပုံကာလက နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုက ကြားဖြတ်အစိုးရ တစ်ရပ်ဖွဲ့ ဖို့ကြီုးစားခဲ့တာကို အားလုံးဝိုင်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်လေ၊
လက်ရှိကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေရလည်း ကြားဖြတ်အစိုးရဆိုတာကို ထောက်ခံဖို့ အခက်အခဲတွေ
အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ် ၊ အထူးသဖြင့် ASIAN နိုင်ငံတွေပေါ့ ၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက်ပဲ လုပ်နေတဲ့ အစိုးရတွေ ကြားမှာ မြန်မာနိုင်ငံက နောက်ပေါ်လာမယ့် ကြားဖြတ်အစိုးရ ကို သူတို့လက်ခံလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး၊ လောလောဆယ် တောင် နအဖ လုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကို ဗီယက်နမ် နဲ့ တရုပ်က ထောက်ခံထားတာ ကိုကြည့်ရင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံတွေရဲ့ သဘောထားကို မှန်းဆနိင်ပါတယ်။ ဆရာလွန်းဆွေက တော့ဘာသဘောနဲ့ ပြောလဲမသိပါ ၊ သူပေးချင်တဲ့ message တော့ မခန့်မှန်းတပ်ပါ ၊
၁၊ လက်နပ်ကိုင် တိုက်ယူခြင်း
၂၊ လူထု အားနှင့် တိုက်ယူခြင်း
၃၊ တပ်မတော်အတွင်းမှ မှ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲကို ရချင်သော တပ်မတော် သားများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကြားဖြတ် အစိုးရ တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ၊
ဒီအယူအဆကလည်း ဆရာလွမ်းဆွေ ပြောထားခဲ့ သလို စိတ်ကူး ယဉ် ဆန်ကောင်း ဆန်နေမယ်ဆိုပေမယ့် အားလုံးကြီုးစားရင် ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ၊
အွန်လိုင်းကနေ အစိုးရအဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ အွန်လိုင်းကနေ စစ်တိုက်နေလိုက်ကြတာ ကလေး ကြနေတာပဲ ခင်ဗျားတိုက ပြည်ပကနေ လှုံဆော် ပြည်တွင်းမှာ ဆူပူမှုဖြစ် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတတ်. ခံရတော့ ပြည်သူတွေချည်းပဲ.။. အခု ခင်ဗျား တို ဖွဲတဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ ဘယ်သူတွေ သဘောတူညီချက်နဲ့ ဖွင်တာလဲ.. ခင်ဗျား တိုကို ကျုပ် သိလည်း မသိဘူး ဒေါ်စု ကလွဲရင်ပေါ့.. တိုင်းပြည် ကောင်းဖို ခင်ဗျား တို ဘာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ.. တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပြည်သူအတွက် ဘာတွေ ဖြည်ဆည်းပေးခဲ့ဘူးလဲ.. လုပ်ဖို အခွင့်အရေး မရှိဘူးလိုတော့ မပြောနဲ့နော်.. ခင်ဗျားတို တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်မဲ့ သူတွေပဲ.. အခွင့်အရေး ဆိုတာ မိမိ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး မှရတာ.. ကျုပ် ပို့စ်ကို ခင်ဗျားတို မတင်ပေးလည်းရတယ်.. ကျုပ်နာမည် တင်လင်းဦး အသက် ၂၄ Computer Technician တစ်ယောက်။ ပြင်ဦးလွင်မှာ နေတယ်။မကျေနပ်ရင် လူချင်းတွေလိုလည်းရတယ်။ ခင်ဗျားတို လုပ်ရပ်တွေ မှားလား မှန်လား ခင်ဗျားတိုသိမှာပါ.. ခင်ဗျား တို တကယ်လုပ်နိုင်ရင် ပြည်ပ ကနေ မအော်နဲ့ြ့ပည်တွင်း ကိုလာ အမေ လိုပဲ သတ္တိရှိရှိ်ပြော ကျုပ်တို ပြည်တွေကလည်း ပူးပေါင်း ဖို အသင့်.။ ခင်ဗျား တို က မြှောက်ပေး ဒီက လူတွေက မစဉ်းစားပဲလုပ်.. ဘယ်နှခါအောင်မြင်လိုလဲ. သေသေကြေကြေ တိုက်ကြပါလား .. ကျုပ်တိုမှာ အဲဒီစိတ်ရှိတယ်..။စစ်သားတွေထဲက လည်း ခင်ဗျား တိုနဲ့ ပူးပေါင်းချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျား တို လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကြည်နေကြတယ်. ခင်ဗျားတိုကို ဘယ်လို ယုံကြည်ကြမလဲ .. ခင်ဗျားတိုက နေရာ ယူဖိုပဲ ကြည့်နေတာ.. တကယ်တမ်း ခံ၇တော့ ပြည်သူတွေပဲ.. ခင်ဗျား မြန်မာ ပြည်မှာ ခင်ဗျား တို လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူးဆိုရင်..။ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ အလုပ်မလုပ်ပဲ အချောင် ခိုစားချင်လို သွားပြီးနေကြတဲ့ မြန်မာတွေ ကို အရင်ကယ်တင်လိုက်ပါဦး...။ေ
ကိုလင်းနေခ .. ရေး ခဲ့ သလို ပဲ ..ကျွန်တော် ရဲ့ အမြင်လဲ ထပ်တူပါပဲ.. ဘာကြောင့်လဲ ဆို တော့ ပြည်တွင်း မှာ က လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခွင့် မရတော့ အခက်သား လား ...ပြည်ပက နေပြီးတော့ အကြံတွေ ဘယ်လို ပဲ ပေးပေး တကယ်တန်း ကြတော့ ပြည်တွင်း မှာ လုပ်ရကိုင်ရ တာ ထင်သလောက် မလွယ်ကူလှဘူး .. ဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ် တို့ လုပ်ခဲ့ သလို .. ပြည်ပက နိုင်ငံတော်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ (ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစားစေချင်တဲ့) လူတွေ စစ်ပညာကို သင်တဲ့လူ က သင်။ လက်နက်စုဆောင်းတဲ့ လူ က စုဆောင်းပြီး မြန်မာပြည်က စစ်အာဏာရှင်တွေကို တိုက်မှ ပဲ ရမှာ။ ဒီတော့မှ ပြည်တွင်း ကပြည်သူတွေ နဲ့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုး တဲ့ စစ်သား တွေလဲ ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြမှာ .. ..
...if Myanmar people got no courage for Jihad, whether Myanmar Muslims can do or can somebody mastermind ?? the fact is simple, the whole world knows how cruel junta is ... so why not we are to cruel to them ... those generals and their business families are everywhere in overseas. We also have so many Myanmar communities all over the world and why not we get the 'hit man' to finished them off rather than talking, talking in blog. It's time to take action.
In 2007, they even killedafew monks and the revolution then stop. So we also no need to do so much, just target those Junta families, close business families andafew Ambassadors.
Stop dreaming of UN or US. We have to act on our own. Those days in Myanmar Kingdom era, even son assassinated king father to take over the thorn. Sometimes Myanmar have no choice, act upon the situations accordingly.
So, stop talking, writing and do something ...
Ko Thiha said...
မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစားရေးမို့ မြန်မာပြည်သားအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူအားလုံးကို ယုံကြည်မှုမပေးနိုင်ဘဲ မဖြစ်နိုင်လို့မြင်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုပေးမယ့်သူလို့ တာဝန်ယူကြမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် ဦးဆောင်ပေးရမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
How many you guys are agree to abolish Burma Army? (don't think possible or not, just answer yes or no)
If we are going to democracy country, it must be completely abolish military dictators, it can't compromise with them. If you compromise you will be also become 2nd dictator.
That's why, every one must be thinking in their mind, ARMY MUST BE ABOLISH and NEED TO RE-BUILD DEMOCRATIC ARMY.
We need strong leadership for that. If we have such kind of leader, public must be follow and might be died, scarify for the country. It can be die 1000 or 10000, who will be there?
I know no body agree for this theory, almost are want to compromise with dictators.
April 29, 2011 3:59 AM
ကောင်းလိုက်တဲ့ IDEA. စစ်တိုက်မယ်.... တိုက်နေတဲ့ ကောင်တွေတောင်.. တိုင်ပတ်နေတာ..
ဘာတဲ့ "ကိုဌေးကြွယ်တို့ အုပ်စုဖြစ်ဖြစ် သံဃာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး" သံဃာတွေက စစ်တိုက်ရမယ်လို့ ဘုရားဟောထားလား...
"ငါကိုယ်တိုင်ထွက်တိုက်မယ်..မင်းတို့ ငါ့နောက်က လိုက်ခဲ့" လို့ပြောမလားလို့...ကြည်နေတာ...
ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ တက်... ငါနောက်မှနေခဲ့မယ်.. အဲဒီလိုလား...
အင်း...ခင်ဗျာတို့က ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့.. ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်..... ခြံပြင်ကဟောင်နေတဲ့ ခွေးတွေနဲ့ တူတယ်။ ခင်ဗျားတို့ စကားနားထောင်မဲ့အစား ဦးကျော်သူရဲ့ စကားပဲ နားထောင်လိုက်တော့မယ်...
ဘာတဲ့...ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး.... မဟုတ်တာတွေပြန်ကြားနေမှတော... ဒုတိယ ကျော်ဆန်း ပဲပေါ့...
"ဦးလွဏ်းဆွေ လာမှပဲ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကြီး ပြာကျ သွားတော့တယ်" ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်...
အဲဒီလို လက်ရုံး၇ည် နှလုံးရည့် ပြည့်စုံတဲ့ လူတွေနဲ့ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ..
ပြောရရင်တော့နင်လားငါလား ပြောရတော့မယ်။on line မှာရန်မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ဦးညွန့်ရွှေ၊နေလင်းခ တို့
ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဖြစ်ပျက်မှုတွေမှာ ဦးဆောင်သူမရှိ လို့
ဒီလိုဒီလမ်းကြောင်းကိုရောက်နေရတာလို့ယူဆမိတယ်။တပ်မတော်ကလဲ သဘောပေါက်တယ်။အကယ်၍များ ကူးပြောင်းခဲ့သော် ဦးဆောင်နိုင်လောက်သောခေါင်း
ရောက်ရာနေရာဒေသမှာ ကိုယ့်လူမျိုး၊ကိုယ်နိုင်ငံ အကျိူးလေးများ၊ဒုက္ခသည်ကိစ္စ၊ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
Very Stupid Idea ....
ကျနော် ကတော့ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဆိုအမြဲတမ်းလေးစားတယ်ပြီးတော့ယုံလဲယုံတယ်ထောက်လဲထောက်ခံတယ် ခက်တာကကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလို့ လူတော်လူကောင်းတွေအတွက်နေရာမရှိတာလဲ လူတွေပြောတော့ဝဠ်မှာအမြဲ၊ငရဲမှာအပ တဲ့အဲဒါကျနော်လုံးဝနားမလည်ဘူးဗျာ မကောင်းတာလုပ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဘာလို့ ဆက်ပြီးအုပ်စိုးနေလဲမသိဘူး အဲဒီဝဠ်တွေဘယ်တော့မှကျွတ်မလဲ ဒါတွေပြောရင်းနဲ့ လေကျနော်မြန်မာပြည်မှာလူဖြစ်ရတာလူဖြစ်ရကျိူးမှနပ်ရဲ့ လားမသိဘူးဗျာ သူများနိုင်ငံလိုလူ့ အခွင့်အရေးပြည့်2၀2နေ၇အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဒေါက်တာရေ ကျနော်တို့ အောက်ကလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးနိင်ငံရေးတိုက်ပွဲဝင်မယ့်နေ့ ကိုကျနော်ရောက်ချင်လာပြီဗျာ အဲချိန်ကျရင်သေလဲတူတူ ရှင်လဲတူတူပေါ့နော်
After 1988 & 2007 revolution, we tried to show our unhappyness without using weapon. I mean peacefully we show out under democracy method.
Not like middle east problems. I mean no fire and no killing people anymore that is we got it now. So UN and US do not need money to expense troops and weapons for Myanmar country. I hope very good time for Myanmar present base on future and consiquencely, these all expenses they will support for Myanmar to become Asia Golden Land. Please don't plan and try to fight with gun. Please wait and see what they do insideMyanmar.
Posted by Aung Myint Htun at 3:17 PM